Dhamaan qaniinyada - Ikkaro
Maqaallada, fiidiyowyada, xiriiriyeyaasha iyo ilaha ku saabsan noocyada kala duwan ee kites iyo adeegsigooda.
Xayeysiin, acrobatic, jar, KAP, iwm
In kasta oo asalkoodu aan la hubin, haddana majaajillada waxaa loo haystaa inay ku dhasheen Shiinaha in ka badan 2.500 sano ka hor. Waxaa jira halyeeyo dhowr ah oo ku saabsan asalkiisa: koofiyad bamboo oo beeraley ah oo ay wadato dabaysha, shiraaca markabka ama laga yaabee inuu yahay shaqadii filasoofkii Mo Ti, oo dhistay qaniis u eg shimbir duulaya saddex maalmood. sida shimbiraha oo kale
Runtu waxay tahay in qaniinyada duulaya ay jimicsi u ahayd Shiinaha. Laakiin, marka lagu daro kuwan madadaalo ama adeegsi diimeed, qaniinyo ayaa loo isticmaali jiray - sida ay sidoo kale ku sameyn lahaayeen Polynesia sannado ka dib - sida qalabka kalluumeysiga, xiridda jillaab leh seddax qaanso ah oo markii dambe laga sii daayay doon, iyadoo laga taxaddarayo in la dhigo aaladda masaafo ku filan oo ka fog hooska doonta ay ku tuurto kalluunka.
Shiinaha ayaa sidoo kale helay codsiyo milatari oo ku saabsan shaygan, oo laga yaabo inay ka muuqdaan aag dagaal, inay cabiraan masaafada u jirta xero go'doomin iyo, xitaa, taariikhda qaarkeed waxaa la sheegaa inay jiraan rag ku duulay alaabtaan magaalooyinkii go'doomiyay.
Qalabku wuxuu ka fidsan yahay Shiinaha dhammaan aagagga uu saameynta ku leeyahay; sidaas darteed, waxay ka muuqataa waddamada Koonfur-bari Aasiya sida Kuuriya, Jasiiradaha Malay, Indonesia iyo Burma, iyo sidoo kale Japan iyo Hindiya. Lama oga goorta ballaarintani ay dhacday, laakiin haddii ay u badan tahay in ay ku dhacdo muddo yar gudahood, maaddaama qaniisadu si dhakhso leh u bilaabmayso in ay ku faafto Polynesia oo dhan, iyadoo loo yaqaan bariga fog sida Jasiiradda Easter Island. Sidoo kale, iyada oo loo marayo Hindiya, waxay ku fidaysaa galbeedka Jasiiradda Carabta iyo Waqooyiga Afrika.
Yurub gudaheeda qaniinyada waxaa looga yaqaanay qarnigii XNUMXaad seddex qaab: duulaankii Mongol, jidadka ganacsiga ee mara Cape Cape of Good Hope iyo xiriirada lala yeesho dunida Carabta. Taariikhda yurub ee qaniinyadu waxay ka bilaabmaysaa waxa loogu yeero Dracos ama dabaylo qaabeeya masduulayaal qaabeeya oo loo adeegsaday calammo maalmihii ugu dambeeyay ee Boqortooyadii Roomaanka. Waxyaabahani waxay ka koobnaayeen jawaan cilladaysan, oo afka weyn leh oo u eg masduulaa ama xayawaan kale oo cajiib ah oo lagu xidhay xidhid dusha sare ee tiirka. Markay hawadu ka buuxsamaysay ayay baratay, oo ay dabaysha ka boodaysay fardooleydii dagaalka. Ujeeddadeedu waxay ahayd inay cabsi ku abuurto cadowga dagaalka oo ay u noqoto silsilad ama qalin qalin u oggolaanaya qaansoleydu inay ogaadaan jihada dabaysha.
Horaantii qarnigii 1405aad, sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan qaawanaanta masduulaaga ah ayaa ka muuqata dukumiintiyada kala duwan ee waqtigaas, sida Conrad Kieser ee ku saabsan teknolojiyadda militariga ee Bellefortis (1430) ama qoraal gacmeed laga soo bilaabo 1752 oo lagu keydiyey Vienna. Laakiin waa dhammaadkii qarnigii toddoba iyo tobnaad markii qaniinyadu si weyn caan uga noqoto Yurub oo dhan, in kasta oo ay ku xaddidan tahay carruurta, sida hiwaayad ahaan ama muuqaal ahaan loo muujiyo. Awooddeeda saynis lama aqoonsaneyn illaa iyo qarnigii siddeed iyo tobnaad, marka laga reebo qaar ka mid ah tijaabooyinka aan dukumintiga lahayn ee Isaac Newton ee ku saabsan dhinacyada joomatari ee qaababka qaniinyada. Saynisyahan kale oo tijaabiyey majaajillada ayaa ahaa Benjamin Franklin oo, maalin duufaan ah bishii Juun XNUMX, wuxuu ku waday tijaabooyin koronto. Markii uu cirka u taagay "qaniinyadiisa korantada" ee caanka ah isaga oo fure ku xidhan xadhigga, waxa uu ogaaday in ay soo baxeen dheecaanno koronto, taas oo u oggolaanaysa isaga in uu muujiyo dabeecadda hillaaca oo uu markii dambe ikhtiraaco birta danabka.
In kasta oo ay yihiin tusaalooyinkan, kalitooyinka looma isticmaalin si joogto ah in kor loogu qaado aaladaha lagu ilaalinayo saadaasha hawada ilaa qarnigii 1891aad. Waxyaabaha ay ikhtiraaceen William A. Eddy (1894) iyo L. Hargrave (XNUMX) ayaa ka soo bilaabmay muddadan, taas oo horseeday kacdoon ka dhashay isticmaalkooda daraasadda jawiga. Kii ugu horreeyay wuxuu sameeyay qaniisyo caadi ah oo leh xargaha xargaha oo loo sameeyay xagal diled ah, kaas oo u oggolaaday inuu ku duulo dabad la'aan; qaniinyada labaad waxay ahayd qaab saddex-geesood ah oo ka kooban laba sanduuq oo isku xidhan oo leh darfo furan.
Dabayaaqadii 1903aad iyo horaantii qarnigii XNUMXaad, oo ku beegan horumarinta duulista, nidaamyo ayaa loo sameeyay ujeeddooyin milatari si kor loogu qaado kormeerayaasha goobta dagaalka. Kuwani waxay ka koobnaayeen tareenno qaniinyo waaweyn ah oo dambiil laga soo lalmiyey, qaniinyada ama xariggeeda, si ay u dejiso kormeeraha. Way guuleysanayeen ama way yaraayeen, laakiin ugu dambeyn buufinnada ayaa si aad ah waxtar u lahaa. Nidaamkii lahaa fursadaha ugu badan, oo ay qaateen xitaa Ciidamada Badda ee Ingiriiska iyo Ciidanka, wuxuu ahaa kii adeegsaday qaniisadda uu hindisay hormuudka duulimaadka duulimaadka diyaaradaha Samuel Franklin Cody (XNUMX), kaas oo ka koobnaa laba unug oo Hargrave ah oo laba jibbaar ah oo midba midka kale ku dhegan yahay baalal xagal leh.
Tobankii sano ee ugu horreeyay qarnigii 1907-aad, Alexander Graham Bell wuxuu tijaabiyay qaniinyo si loo sameeyo mashiin duulaya oo la hagi karo. Wuxuu dhisay majaajilooyin aad u tiro badan oo ka kooban tiro badan oo unugyada tetrahedral ah. Sannadkii 3.393-kii wuxuu dhisay mid ka mid ah 50 unug, oo lagu jiiday doon uumaysa, oo kor uga kacday 1909 mitir heerka dhulka. Dhismayaasha kale ee saddax geesoodka ah ee waaweyn, kuna qalabaysan mootada, ma aysan siinin natiijada la rabay, sidaa darteed sanadkii XNUMX, wuxuu doorbiday inuu naftiisa u huro howlo kale.
Dagaalkii Labaad ee Adduunka kadib, injineerkii Mareykanka ahaa ee Francis Rogallo wuxuu soo saaray qaniinyo u furay wadada qaabka cusub ee loo yaqaan semi-dabacsanaanta, oo lagu garto helitaanka qaabkeeda iyada oo ay ugu wacan tahay isku dhafka ficillada dabaysha iyo nidaam ka kooban lix nooc. NASA waxay xiiseysey Rogallo fekerkiisii, kaas oo uu qorsheynayay inuu u adeegsado baarashuut dib ugu soo noqoshada kaabsulka hawada. Kuwa hadda socda iyo kuwa khadadka laba geesoodka ah ayaa ah labada cawaaqib ee baaritaankaan.
Sannadkii 1963-kii, Domina C. Jalbert Mareykan ah ayaa waxaa dhiirrigeliyay garabka diyaaraddiisa si uu u hindiso qaanso jilicsan (parafoil) oo lahaa dhammaan faa'iidooyinka mabaadi'da aerodynamic ee baalasha adag, maadaama qaniinyadu aysan u baahnayn wax ul ah, oo ay ku guuleysatay qaab iyo qallafsanaanta duulimaadka iyada oo loo adeegsanayo boorsooyin gudaha ah oo dabayshu ku buufisay, taas oo siisay qaab baal ah degganaansho weyn iyo xoog qaadis.
Maalmahan soo bixitaanka laba, seddex iyo afar xarig oo jilicsan iyo qaniinyada jarista ayaa ka dhigtay mid caan ah, ciyaar ahaan iyo madadaalo ahaan.
Sida loo sameeyo qafis cufan oo guriga lagu sameeyo
Hadaad rabto mashruuc inaad sameyso usbuucaan. Waxaan helnay taxanahan 5 fiidiyow ah in waxay si tartiib tartiib ah u sharaxayaan sida loo sameeyo qafis "prismatic" ah
Waa khariidad jilicsan oo salka saddex gees leh, dhismaheeda waxaan u isticmaali doonnaa caws qaab-dhismeedka iyo warqadda nudaha.
Waxaan ku bilaabaynaa qalabka loo baahan yahay si loo sameeyo qaniinyada.
Sida loo sameeyo kite caag ah
Ciidda Istaarka ayaa soo socota, dhaqan ahaanna carruurta oo dhan, mana aha sidaas inay carruurtu rabaan inay duulaan mid ... Akhri akhriska
Sida loo sameeyo qaniinyo dhaqameed guriga lagu sameeyo
Toddobaadkii Quduuska ahaa waa la soo dhaafay, xilli qaniisaddu tahay boqoradda aan muranka ka taagnayn oo ay ayeeyadood ku daryeelaan ... Akhri akhriska
Dambiile - Caruurta Waraaqaha Qoraalka ah
Waxaan tusi doonaa sida dhiso warqad fudud, aad bay ugu fiican tahay kuwa yaryar inay sameeyaan, ama guriga ama aqoon isweydaarsi.
Waxay ku saabsan tahay bumblebee kite abuuray by Niil Velez
Qaniinyadu waa xaashi A3 warqad ah oo labanlaaban, la jiifiyay oo dun tolli ah lagu dhejiyay diyaarna u tahay in la duulo.
Sidaa darteed, waa wax fiican, in la yeesho astaamaha halka ay lagama maarmaanka u tahay in la istcimaalo, loo dhiibo go'yaasha carruurta si ay u sawiraan sawir iyo markay dhammeeyaan tuuritaankiisa oo ay ku ciyaaraan.
Garabkii Decathlon 185
Haddii aad tan akhrinaysid waxaa hubaal ah inay tahay inaad mid iibsatay. Waan ka xumahay. Waxaad sameysay qalad la mid ah aniga, laakiin ... Akhri akhriska
Farqiga u dhexeeya hawada iyo dabaysha
Badanaa waxaan ka hadalnaa hawada iyo dabaysha oo la isweydaarsado, sidii iyagoo isku mid ah. Laakiin tani maahan sidaas… Akhri akhriska